Jiolahin’Antanimena sy Vasakaosy Roa lahy mitondra antsy tratran’ny mponina nanendaka
Lehilahy 2 no voasambotry mponina ka natolotra ny polisy avy tao amin’ny PPA Antaniavo ny harivan’ny faran’ny taona 2019, tamin’ny 7 ora sasany teo teny Vasakaosy noho ny resaka fanendahana mitondra antsy.
Lehilahy iray hamonjy fodiana no niharan’ny fanendahana tetsy Vasakaosy, rehefa avy niala taksibe teo Antanimena. Nahatsikaritra lehilahy roa nanaraka azy avy ao aoriana ity tovolahy ity ka rehefa tonga teo amin’ny fijanonan’ny fiara fitanteram-bahoaka Vasakaosy dia nisy olona hafa nanakana azy sady nanambana antsy, ireo tao aoriana nanaraka azy kosa nisintona ny kitapony nisy telephone sy anton-tantaratasy sarobidy maro mikasika azy. Nandositra ireo olon-dratsy rehefa azony ilay kitapo. Nanohy ny lalany nody ity lehilahy voaendaka ity, minitra vitsy taty aoriana dia nifanena tamin’ireo mpanendaka azy indray izy , tadidiny rahateo ny endrik’izy ireo ka avy hatrany dia niantso vonjy ilay tovolahy. Taitra ny mponina manodidina ary nanejika ireo olon-dratsy ka voasambotry ny fokonolona ny roa tamin’ireo. Noentiny avy hatrany tany amin’ny Paositry ny Polisy eo Antaniavo ireo roa lahy vosambotra. Taorian’ny fanadihadiana natao azy ireo dia fantatra fa efa mpamerin-keloka ny iray amin’ireto mpanendaka ireto.